अष्ट्रेलियामा एक नेपाली विद्यार्थीलाई १८ महिना जेल सजाय – Enepali News
अष्ट्रेलियामा एक नेपाली विद्यार्थीलाई १८ महिना जेल सजाय
July 10, 2020 236
काठमाडौँ । अष्ट्रेृलियामा एक नेपाली विद्यार्थीलाई १८ महिना जेल सजाय सुनाइएको छ । नेपाली विद्यार्थी प्रविन मैनालीलाई सिड्नीमा रहेकाे एक अदालतले ठगी मुद्दामा १८ महिनाको जेल सजाय सुनाएको हो ।
२० वर्षीय मैनालीलाई न्यू साउथवेल्स प्रहरीले गएको ३ मार्चमा एक वृद्धाको रकम क्रेडिट कार्डबाट चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार उनले चार जनाको कार्डबाट २१ पटकमा १८ हजार ५ सय अष्ट्रेलियन डलर आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेका थिए ।
अनुसन्धानमा उनलाई भारतबाट सञ्चालित ठगहरूको गिरोहले प्रयोग गरेको खुलेको छ । उनले भारतका ठगी गिरोहरुका लागि आफूले यस्तो काम गरेको र ठगी गरेको रकममध्ये केही राखेर बाँकी भारतमै पठाइ्दिने गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनको बारेमा थप केही खुलेको छैन । मैनाली सन् २०१८ मा आईटी पढ्नका लागि अस्ट्रेलिया पुगेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा भारतीय गिरोहले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर ठगी धन्दामा प्रयोग गर्ने घटना बढेका छन् । केही हप्ता अघि मात्रै अष्ट्रेलियामा यस्तै प्रकृतिको घटनामा एक जोडी नेपाली विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए। एक अन्तर्राष्ट्रिय ठगी गिरोहका सदस्य रहेको आरोपमा २२ वर्षकी नेहा गिरी र १९ वर्षका आयुष भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
Prevजाजरकोट पहिरोः ३ जनाको शव फेला, ९ जना अझै बेपत्ता
Nextडीभी परेका नेपाली अब अमेरिका जान नपाउने !
उपत्यका प्रवेशमा कडाइ, स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य
थप ३ जनाको मृत्यु,कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुगेको छ
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3406)
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2520)
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2166)
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुँदैछ ? हेर्नुहोस् ओजराज उपाध्यायले लेखेकाे वार्षिक राशिफल (1923)
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (1912)
O M G << हेलिकप्टरबाट उद्दार गरिएकी गर्भवती महिलाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु: (1903)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1676)
ट्रम्प भन्छन् अब कोरोना निको पार्ने औसधि बनिसक्यो (1629)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1496)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1442)